कोभिड बढ्यो, प्रभावित होला फिल्मको रिलिज ? « Mazzako Online
कोभिड बढ्यो, प्रभावित होला फिल्मको रिलिज ?
विश्वमा फेरि कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । भारतमा दैनिक ४० हजार माथि कोभिड संक्रमित देखिन थालेका छन् । यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । नेपालमा पनि कोभिडका विरामी बढ्न थालेको आँकडा सार्वजनिक भैरहेको छ ।
नेपाल सरकारले करिब १० महिनापछि नेपाली फिल्म क्षेत्र सुचारु गरेको थियो । फिल्म क्षेत्र सुचारु भएपनि हलमा दर्शक छैनन् । फिल्म छायांकनको काम भने धमाधम भैरहेको छ । केही नेपाली फिल्मको प्रचारको काम भैरहेको छ । फिल्मले प्रदर्शन मिति तोकेर प्रचारलाई अगाडि बढाएका छन् ।
चैत्र २७ गते कृष्ण लिला र लप्पन छप्पन २ रिलिजको तयारी गरिएको छ । दुबै फिल्मको ट्रेलर पनि सार्वजनिक भैसकेको छ । तर, दैनिक रुपमा बढिरहेको कोभिडको समयमा निर्माताले जोखिम मोल्छन् होला त ? फिल्म रिलिज प्रभावित हुने संभावना बढेर गएको छ ।